Rosia: Voaheloka Hiditra Toby Fanasaziana Mandritra ny Roa Taona Latsaka ny Mpitoraka Blaogy Iray ao Tatarstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2017 16:28 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, English
Irek Murtazin, sary an'i Sergey Varshavchik
(Fanamarihana: Lahatsoratra tamin'ny Novambra 2009)
Ny 26 Novambra, voampangan'ny fitsaràna ao amin'ny fileovan'i Kirov ao Kazan (renivohitry ny Repoblikan'i Tartastan) ho nanala baraka sy nanao fampirisihana ny fankahalan'ny olona i Irek Murtazin, lehilahy 45 taona mpanao gazety sady mpitoraka bilaogy, hoy ny tatitry ny Gazeta.ru [RUS]. Voasazin'i fitsaràna hiditra anaty toby fanasaziana (karazanà fampidirana an-trano maizina izay tsy iainan'ireo voaheloka anaty fonja fa anatinà toby iray manokana ho an'ireo voafonja) mandritra ny herintaona sy sivy volana i Murtazin.
Teo amin'ny herintaona teo izay, ny Desambra 2008, dia voampanga ho nanala baraka an'i Mintimir Shaimiev, Filohan'i Tatarstan, i Murtazin – lohan'ny sampana fanaovangazetin'i Shaimiev teo aloha ary mpitoraka bilaogy avy amin'ny mpanohitra amin'izao fotoana, fantatra koa amin'ny anarana irek-murtazin [RUS] ao amin'ny LiveJournal. Ny 12 Septambra 2008, namoaka lahatsoratra izay nanononany tsaho iray momba ny fahafatesan'i Shaimiev i Murtazin. Nanoratra izy fa [RUS]:
Nisy vaovao mahatsiravina tonga…
…Nodimandry tampoka teo amin'ny faha-72 taonany i Mintimir Sharipovich Shaimiev, raha naka rivotra tany Torkia (Kemer).
Raha tsorina – tsy mino izany aho. Raha ny marina – tsy te hino aho. Satria, raha marina izany, dia feno zavatra hikorontana, ho feno tolona lehibe mba hipetrahana eo amin'io toerana io, ka hikarepodrepoka etsy sy eroa ny volon'ireo tantsaha. Ary noho ireo fijery ireo no hahatonga ny olona akaiky an'i Shaimiev hiezaka hanafina ity vaovao ity. Mba hahazoana fotoana hivondronana (na handaozana ny firenena mihitsy aza). Izany no mahatonga ny vaovao ofisialy tsy hiseho raha tsy afaka herinandro, amiko.
Tamin'io andro io ihany dia efa voalaza fa diso ilay tsaho momba ny fahafatesan'i Shaimiev, saingy nihena be ny anjaran'ilay orinasa mpamokatra menaka voalaza fa an'ireo solontenan'ilay antsoina hoe “foko Shaimiev”, hoy ny Lenta.ru [RUS]. Tamin'ny Desambra 2008, voampangan'ny fitsarana ho nanala baraka sy nandika ny tsimatimanota manokan'i Shaimiev i Murtazin (ilaina ny manamarika fa nanafaka madiodio an'i Murtazin manoloana ity fiampangàna farany ity, ary ity ihany, ny fitsarana).
Naharitra teo amin'ny herintaona teo ny fitsarana, ary nanampy ireo fiampangàna hatrany ny mpampanoa lalàna, manameloka an'i Murtazin ho mpanala baraka, tao amin'ny blaoginy, sy tao anatin'ny bokiny “Mintimir Shaimiev: Ilay Filoha Faran'i Tatarstan. Tapany voalohany” ary tao amin'ny vaovao-tselatra “Ny vaovaonay avy aty Kazan” (“Наши казанские вести,” izay nosoritan'i [RUS] Murtazin tamin'ny Oktobra 2008 ho “famintinana an-tsoratra” ny blaoginy ao amin'ny LiveJournal).
Nilaza i Murtazin fa tsy manaiky io didim-pitsarana io ary hampakatra fitsarana Tampony.
Azonao jerena eto ireo sary tamin'ny fitsarana.
Ny tantaram-piainan'i Irek Murtazin (araka ny voalazan'ny Anticompromat.org)
Teraka tamin'ny 1964 tao amin'ny toeram-ponenana tao Bogatye Saby, ao Tatarstan
1981-1990 – nanompo ny Miaramila Sovietika, sy ny GRU (vondrona fitsikilovan'ny miaramila)
1985 – nivoaka tao amin'ny Anjerimanontolon'i Kazan momba ny Tanky
1990-1991 – mpanampy ilay mpanao lalàna, Vladimir Lopatin
1995 – nivoaka tao amin'ny Akademia Fianarana Lalànam-panjakana tao Moskoa
1991-1995 – toniandahatsoratr'ireo gazety “Avaratra Rosiana” sy “Gubernskie Vesti”
1993-1995 – toniandahatsoratry ny TV-7, fantsona TV ao Vologda
1995-1999 – lehiben'ny biraon'ny VGTRK (orinasan'ny TV am-panjakana lehibe indrindra) ao Kazan
1999-2002 – lohan'ny sampana fanaovangazetin'ny Filohan'i Tatarstan
2002-2003 – lohan'ny fantsona TV “Tatarstan”
2003-2004 – lohan'ny biraon'ny VGTRK tao Minsk, ao Belarus
2006-2007 – mpikambana tao amin'ny sampana isam-paritry ny antoko Rosia Marina tao Tatarstan
2008-2009 -mpamoaka sady toniandahatsoratry ny vaovao-tselatra “Ny vaovaonay avy aty Kazan” (atonta ivelan'i Tatarstan any Cheboksary, Repoblikan'i Chuvashia)